प्रचण्ड र डा. भट्टराईबीच भेटवार्ता Canada Nepal
प्रचण्ड र डा. भट्टराईबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसपाका नेता डा.बाबुराम भट्टराईसँग पनि भेट गरेका छन् ।
विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि पछिल्लो समय नेताहरुबीच भेटघाट बढ्न थालेको छ ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेले सत्ता सहकार्यका लागि जसपासँग छलफल गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गरेको केही समयपछि सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए ।
उनीहरुबीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएको थियो । देउवापछि प्रचण्ड जसपाका नेता भट्टराईलाई भेट गर्न टोखा पुगेका हुन् ।
फाल्गुण २५, २०७७ मंगलवार २०:२३:१६ बजे : प्रकाशित